भूकम्पको_त्रास्_अनि_मेरो_सरिता_संगको // Nepali Sex Story - Nepali Sex Tube
भक्तपुरको एउटा गाउमा बस्छु म । कुरा २०७२साल बैशाख १२ को हो, दिउसो ११:५६ मागएको महा भूकम्पले हामि सबै लाइ त्रसितबनाएको त्यो रात ! हाम्रो टोलमा खासै ठुलोक्षति भएको थिएन, एकाध घरको पर्खालभत्केको थियो, कसैको पानिको ट्यांकी खसेकोथियो बस त्यत्ति ! तर क्षण क्षणमा आइ
रहेको धक्काले हामि टोल बासि सबैलाइ त्रासदिईरहेको थियो । टोल बासीहरु को सल्लाह माघर नजिकैको चौरमा एउटा तरकारी खेति कोलागि बनाएको बाँसको घरमा पाल टाँगेरअन्दाजी १००/१५० जना जति बस्नेव्यवस्था मिलाएको थियौ ।
अचम्मको कुरा केथियो भने मेरो टोल मा बस्ने धेरै नया अनुहारदेखि रहेको थिएँ, कहिले काहीं मात्र बस स्टपमा देखिने अनुहार, चोकमा देखिने अनुहार आजनजिक बाट नियाल्न पाको थिएँ । राम्रा राम्राकेटिहरु टन्नै रैछन् मेरो टोलमा । एक दुइ जनासंग बोल्न पनि भ्याई हाले, एक दुइ जना चाहिँआफै बोल्न आए ! ति मध्ये एक जना मेरोघरको छेउको फुच्ची पनि थिई । त्यस्तै१९/२० बर्षकि तिनीको नाम सरिता थियो,भर्खर +२ सकेर ब्यचेलरको प्रथम वर्षकि
बिद्यार्थी, हेर्दा ठिकै थिई, अनुहार मा अलिअलि डण्डीफोर आएको, घर बाट भाग्दा फेरीलगाएको खुकुलो टीशर्ट, अनि भित्र ब्रासमिज नलगएको, यता उता हिन्दा पुक्लुकपुक्लुक दुध हल्ली रहेको थियो ।
दुब्लो सरिर रदुब्लो अनुहारमा ठुलो दुध र चौडा चाक, अलिनमिलेको जस्तो लागेको थियो तर गर्न तमज्जा आउला जस्तो थियो । बैंसको ओजधपक्क थियो । दिउसो घर बाट केरा र स्याउल्याएको थिएँ, उसलाई दिएँ, घनिष्ठता पनिअलि अलि बढी सकेको थियो एक दिन मै !त्यो रात हामि सबै सुत्ने तरखर गर्दै थियौं । मर आमा एउटा कुनामा बिछ्यौना मिलाएर बसीरहेका थियौं र म ल्यापटपमा नेट चलाएर बसीरहेको थिएँ । संयोग बस सरिता को परिवार पनिहाम्रो ओछ्यान को साइड मा हामि तिर टाउकोफर्काएर ओछ्यान मिलाएर बस्न आइ पुगे ।
यस्सो हेरेको म तिर हेर्दै रैछी । मैले घरको वाईफाईको पासवर्ड चलाउछौ ? भनेर सोधेरपासवर्ड दिएँ । “थ्यांक यु दाइ” भनेर खुसि हुदैमोबाइल मा फेसबुक चलाउन थालि । बेलाबेलामा म तिर पुलुक्क हेर्थी र संयोग बस मैलेपनि हेरी रहेको बेला पर्थ्यो । मैले नजानीनजानी उसको दुध मा हेरेको पनि देखी उसले
एक दुइ चोटी । यस्सो मिलाएको जस्तो गर्थीतर एकछिन मै सुतिको टी शर्ट तल सरेरभित्रको गोरो दुध र छाती देखिन्थ्यो । मलाईगारो भै सकेको थियो । भूकम्पको डर भए पनिघर गएर दुइ चोटी झार्न भ्याइसकेको थिएँसरिता लाइ ल्वाम ल्वाम चिकेको सम्झिदै ।रातको १२ बजी सकेको थियो, निन्द्रा लागेको
थिएन । यता उति हेरेको अरु छिमेकि हरु मस्तनिन्द्रामा पुगी सकेका थिए, साइडमा हेरेकोसरिता पनि मोबाइल चलाउदा चलाउदै सुतिसकेकी थिई । मेरो छेउ मा आमा पनि सुतिसक्नु भएको थियो । मेरो देब्रे पट्टी आमा, मेरोदिने पट्टी चाही म तिर टाउको फर्काएर सरिता,उसको भाइ, र उसको आमा सुतेका थिए । छातीतिर सरिता, अलि खुट्टा तिर चाही उसको भाइर आमा ।
रातिको ३ बजे केहि कुरा मेरो छातिमा लागेकोजस्तो लागेर निन्द्रा खुल्यो, यस्सो हेरेकोसरिता को हात मेरो छाति मा आइ पुगेको रहेछ,सायद निन्द्रा मा हात खुट्टा चलाउने बानि रैछउनको । हात झिकेर उता राख्न के लागेको थिएँ,उसले पुक्लुक्क म तिर हेरी । निन्द्रा मै रैछे,सरि भनेर उता हात पुर्याई । मलाई निन्द्रालागेको थिएन मोबाइल निकालेर चलाउन थालें ।एकछिन पछि यस्सो हेरेको फेरी उसको हातमेरो छाति मा आइ पुगी सकेको थियो । यसै त
रातको समय मा गर्न मन लाग्ने मलाइ, अझैकेटि को हात मेरो छाति मा आउदा मलाईऔडाहा भै सकेको थियो । मोबाइल बन्द गरेरसुतेको जस्तो नाटक गरेर मैले पनि ढल्केरउसको हात मा हात राखी दिएँ, निदाएको जस्तोगरेर । नरम हात, अलि अलि पसिना आएकोथियो र पसिना ले गर्दा चिसो भएको थियो ।मज्जा ले मुसारी रहेको थिएँ, निन्द्रामा चलेकोजस्तो गरेर । आखा आधि बन्द गरेर उसले थाहपाउला कि भनेर पनि हेरी रहेको थिएँ । एकछिन
पछि उसले थाह पाई जस्तो थियो, उसले पनिमेरो हात संग खेली रहेकी थिई ।
वरी परि हेरकोनिस्पट्ट अध्यारो थियो, मैले उसको हातबिस्तारै तल तिर सारी दिएँ । ब्ल्यांकेट भित्रउसको हात ले मेरो छाति मस्त ले चलाउदै उसलेपनि तल तल सारी । मेरो लाड़ो ठन्केर तातोरन्कि रहेको थियो, ट्राउजर च्यातौ कि जस्तोगरेर । उसको हात मेरो ट्राउजर भित्र हाली दिएँ। उसको सुकुमल हात,नमिल्याई नमिल्याई मेरोलाड़ो चलाउन खोज्दै थिई । बिस्तारै उसकोटाउको लाइ यस्सो तानेर म तिर आउ भनेरइसारा गरें । बिस्तारै सरेर म तिर आइ । मन मनैसोची सकेको थिएँ, केटि को चिलाइ सकेको छ,मौका गुमाउनु हुदैन ! फेरी मेरो एकदम बेचैन मन,चिक्न मन लागि सकेको थियो, तात्तिएको
लाड़ोलाइ उसको पुतिको रसले ठण्डा बनाउनमन लागि सकेको थियो । मैले बिस्तारै सासमाउसलाई “मलाई एकदम तिमि संग चुम्मा मात्रगर्न मन छ, ट्वाइलेट जान्छु भनेर तिमि मेरो घरआउ है राति कसैले देख्दैन, म एकछिन माआउछु, मेरो घर मा कोहि छैन” भने । उसले पनिएकछिन सोचेर टाउको बिस्तारै हल्लाएर सानोसास मा “हुन्छ” भनि । उसले “हुन्छ” भने पछित मेरो मन झन् बेचैन हुन थाल्यो ! अब केहोला ? कसैले थाह पायो कि ? थाह पाउने हो
कि ? टोलमा बेइज्जत हुने हो कि ? कसैलेनोटिस गर्ला कि ? यावत कुरा हरु मनमा खेलीरहेको थियो ।
वरि परि यस्सो हेरें, निस्पट्ट अध्यारो रात,भूकम्प ले त्रसित छिमेकिहरु बल्ल बल्लढुक्कले सुति रहेका, बेला बेला आइ रहने सानोसानो पराकम्पनले पनि उठाउन नसक्ने गरिशान्ति को सास मा सुति रहेका, अलि परचोरको डर, भूकम्पको डरले आगो बालेर गफगरि रहेको एक टोलि । एकछिन अघि मात्र
आगो तापेर आएको थिएँ म अनि थाह थियो किआगो तापको ठाउँ बाट हामि सुतेको ठाउ खासैदेखिदैन थ्यो ।
सरिता बिस्तारै उठी । सुत्दा ओढेको पछ्यौरालेटाउको छोपेर यता उति हेर्दै थिई । म चाहिं सुतेजस्तो गरेर सरिता लाइ हेर्दै थिएँ । यता उतिहेरेर उनले म तिर पुलुक्क हेरेर, अलि डराएजस्तो गरेर, अलि अलि लजाए जस्तो गरेर,अलि अलि मुस्कुराए जस्तो गरेर जान्छु हैभनेर टाउको ले इशारा गरिन । मैले पनि इशारा मैतिमि जाँदै गर म पछि पछि आइ राछु भनें ।सरिता बिस्तारै उठी, चप्पल लगाई, अनिबिस्तारै मेरो घर तिर लागि । म पनि एकै छिन् माउठें, यता उति हेरे अनि पछ्यौरा ओडेर बिस्तारैघर तिर गएँ । घर छिर्ने ठाउमा भूकम्पले ढालेकोहाम्रो पर्खालको इट्टा हरु छरपस्ट थियो । डरलागि रहेको थियो,बिस्तारै लडला कि भनेर भुइँमा हेर्दै कम्पाउण्ड गेट तिर गएँ, सरिता बाहिरनै कुरी बसेको रैछिन । गेट खोलें, भित्र गएँ,सरिता पनि भित्र आइ, हाम्रो घर तिन तल्लको छ, हामि चाही तेस्रो तल्ल मा बस्छौ ।बिस्तारै माथि पुगेउं । हाम्रो तल्लाको ढोकाखोल्न मात्र के लागेको थिए, सरिता बिस्तारैमलाई समातेर, कानमा आएर “मलाई कस्तो डरलागि रहेको छ, कसैले देख्यो भने ?
तपाईकोमम्मी आउनुभयो भने ? ” भनि । हुन तर डरमलाई पनि लागेको थियो, तर भर्यांग चढे देखिसरिता को दुध माडेको, पुती चाटेको, चिकेकोकल्पना गर्दै लाड़ो रनक्क रन्कि सकेको थियोफेरी । “मम्मी पिसाब फेर्न घर आउनु हुन्न,घरमा कोहि आउदैन, तिमीलाई कहाँ गएको भनेरसोध्यो भने लंग टोइलेट गाको भन्देउ न,नडराऊ अब, यहाँ सम्म आइ सक्योउ, अबभित्र एकछिन बसेर जाउ न हुन्न?” भनें ।सरिता ले भुइँ तिर हेरेर, मुन्टो हल्लाएर हुन्छभनि । मेरो मन ढुक्क भयो । बिस्तारै ढोकाखोले, सरिता लाइ पहिला भित्र जाउ भने, अनिपछि पछि म पनि भित्र छिरे, छिर्ने बित्तिकैढोका लगाए, चुकुल लगाएँ । बल्ल मुटु ढुक्कभएको थियो । सरिता लाइ हेरें ढोकाको छेउमाघोसे मुन्टे लगाएर उभिएकी थिई । मैले देब्रेहातले अँगालो मारे, मेरो जिउ तिर तानेर ल्याएँ,
अर्को हातले पनि अंगालो मारें, अनि बिस्तारैनिधारमा चुम्मा गरेर “नडराऊ अब, केहि भयोभने बिहे गरौलानी, म त्यति नराम्रो त लाग्दैननि ? ” भनें । सरिता ले बिस्तारै स्वासमामुस्कुराउदै, मेरो छातिमा टाउको राखेर “हस्”भनि । टाउको बाट मन्द र मिठो श्याम्पूकोबास्ना आएको थियो । पक्कै पनि सनिबारकोदिन आज नुहाएको हुन पर्छ भन्ने सोचे मनमनै। मलाइ भर्खर नुहाएको सुगन्ध एकदम सेक्सीलाग्छ । मलाई अझै थाम्न गारो भै सकेकोथियो । बिसतारै अँगालो फुकाएर उसको दाइनेहात मेरो देब्रे हात ले समातेर, बैठक कोठा तिरउसलाई लिएर गएँ ।
बैठक कोठामा सानो भुइँ खाट थियो जसमापहिला पनि मैले मेरो गर्ल फ्रेन्ड संग चिक्नेगर्थें । भुइँ खाट भएकोले हल्लेर आवाजआउदैन थियो । सरिता लाइ लिएर गएर, भुइँखाट मा गएर बस्न भने । सरिता बिस्तारैलम्पसार परेर, आँखा चिम्लेर पल्टिई । यस्सोहेरें, उत्तानो परेर पल्टिएकि सरिता लाइ,बास्तबमा निकै राम्री देखिएकी थिई सरिता ।लामो लामो स्वास तानी रहेकी, अप्ठ्यारो मानेजस्तो गरेर जिउ तन्काई रहेकी, केहि कुरा कोप्यास लागेको जस्तो, केहि कुरा खान मनलागेको जस्तो गरेर ओठ जिब्रोले चलाई रहेकिथिइन । कपाल फिजिएर छरपस्ट भएको थियो ।मलाई गारो भै सकेको थियो, उसको ट्राउजरखोलेर चिक्दिम जस्तो लागि सकेको थियो । तरकन्ट्रोल गरें, अनि उसको उमेर, उसको बैंस,उसको नरम छाला, उसको सरिरबाट मन्द मन्दनिस्की रहेको बास्ना, सबै महसुस गर्न मनलाग्यो । बिस्तारै उसको घाटी बाट कपालपन्छाएर, घाटीमा मेरो ओठ ले बिस्तारै स्पर्शगरें । त्यसो गर्दा सरिताले लामो स्वास नाखबाट फाली, जिउ तन्काइ, अनि उसको देब्रे हातले मेरो टाउको मा पछाडी बाट बिस्तारैसुम्सुमाइ । उसको नरम औलाले मेरो कपालखेलाउदा पनि छुट्टै मजा आइ रहेको थियो ।
बिस्तारै उसको गाला तिर बढे मेरा ओठ हरु,बाटोमा भेटिएका सबै छालाहरुलाइ मेरा ओठकोस्पर्सले महसुस गर्दै, तातो, भिजेको जिब्रोलेबेला बेला उसको मन्द बास्ना को सुगन्ध लिदैथिएँ । यी सबै गर्दा सरिताको दुवै हात ले मेरोकपाल मजाले खेलाउदै थिई । अघि नाख बाटमात्र लामो लामो स्वास फालिरहेकि सरिता,अहिले चाही मुख बाट बिस्तारै सानो आवाजनिकालेर लामो लामो स्वास फाली रहेकी थिइ ।बिस्तारै उसको ओठमा चुम्मा गरि दिए, मेरोजिब्रोले बिस्तारै उसको ओठ चाट्न थाले,यसो गर्दा उसले पनि बिस्तारै जिब्रो निकालीअनि मेरो जिब्रो र उसको जिब्रोले जब पहिलोपटक स्पर्श गर्यो, स्वर्गीय आनन्द आएकोजस्तो भयो । यसो गर्दा गर्दा म सरिता माथिचड्न भ्याइसकेको थिएँ । सरिता को खुट्टाफाट्टीएको थियो, म खुट्टाको बीच मा थिए,उसको हात मेरो टाउकोमा थियो, मेरो हातउसको टाउको मा थियो, र हामि जोड जोडले टंगकिस खाइ रहेका थियौं । मज्जा आइ रहेकोथियो किस गर्नमा सेक्स गरे जस्तो ।
मलाई सरिता को स्वाद अझै लिन पुगेको थिएन। बिस्तारै उसको गन्जी फुकाली दिए । यस्सोहेरेको, कस्तो मजा को दुध आहा! एकदम गोरो रनरम छाला थियो उसको , दुध को मुन्टो सारोभएर ठुलो भएको थियो । मलाई एकदम चुस्नमन लाग्यो उसको दुध, अनि बिस्तारै उसकोकान मा , उसको घांटीमा, उसको छातिमा किसगर्दै उसको दुधमा बिस्तारै किस गरे । पहिलाफेदमा किस गर्दै, जिब्रोले छाला चाट्दै, दुध कोमुन्टो मा बिसतारै किस गरे । यस्सो गर्दा तसरिता ले अघि मन्द स्वास मा मुख बाट फेरेकोस्वास अहिले सानो मधुर आवाजमा परिवर्तनभएको थियो । यस्सो उसको अनुहार हेरेको,आँखा चिम्म गरेर, टाउको माथि तिर बाटपछाडी फर्काएर, लामो लामो स्वास फेरेर,आ….ह आ… ह गर्दै थिई । उसको दुधको मुन्टोचलाउदा त झन् छिटो छिटो स्वास मा आ…हआ…ह. गर्थी । अहिले त उसले मेरो कपाल झन्बेस्सरी समातेर मसाज गर्न थालेकि थिई मेरोटाउको । पुरा स्वर्ग मा पुगे जस्तो अर्कैदुनिया मा मस्त थिई सरिता !
उसको दुध त्यसरी चुसी रहदा मेरो पेट भनेठ्याक्क सरिता को खुट्टा को बीच मा थियो ।अहिले सम्म त खै कसरि हो कसरि हो, त्योआनन्द को मद्होसि मा म नांगै भै सकेको थिए ।सरिता को पनि तल पेन्टी मात्र थियो र उसकोदुध चुस्दा मेरो पेट मा उसको भिजि सकेकोपेन्टी को चिसो स्पर्श आइ रहेको थियो ।
मलाई अब सरिता को सबै स्वाद लिन मन लागिरहेको थियो । बिस्तारै अब उसको दुध बाट तलझरेर , दाइने हात ले उसको देब्रे दुध को मुन्टोखेलाउदै , दुध माड्दै, ओठले उसको पेट चुम्दै,नाइटो चुम्दै, उसको कम्मर चुम्दै, बिस्तारै तलझरे । सरिता ले नमान्ला कि भनेर उसकोअनुहार हेरेको, सरिता त अझै हराईरहेकी थिई,उनकै स्वर्ग को संसार मा । उसको कम्मरचुम्दै, बिस्तारै, तल झर्दै पेन्टी बाहिर बाटउसको पुती माथि किस गरि दिए । पेन्टी लचप्पैभिजि सकेको थियो । उसले प्रयोग गर्नेसाबुन, पेन्टी धुने सर्फ, र उसको पुती कोबास्नाको मिठो समिश्रण आइ रहेको थियो ।सरिता को स्वाद मलाई मन परि सकेको थियो ।बिस्तारै उसको थाईको भित्रि भाग चुम्दैउसको पेन्टी खोलि दिए ।
अब सरिता पुरा नांगैथिई । म तल थिए । तल बाट उसलाई माथि हेरेएकचोटी । हात फालेर उत्तानो परेर सुतेकी,कपाल एता उता फिजिएको, घुडा माथिफर्काएर खुट्टा टेकेकी अनि उसको गोरो खुट्टाको बीच मा गुलाफी रंगको भर्खर फक्रिनलागेको गुलाफको फुल जस्तै दुइ पत्रको उसकोमनमोहक पुती ! अलि अलि मात्र आएको रहेछपुती माथि रौ पनि, गोरी भएकोले होला, रौकालो नभई फिक्का कैलो रंगको थियो ।बस्ताबमै मनमोहक थियो उसको पुती । मनथाम्नै सकिन, लाड़ो रंकेरा तातो, रातो, ढुंगाजस्तो सारो भएको थियो । फेरी ग्वाम्म गएरसरिता को पुतीमा मेरो मुख जोडी दिए । जिब्रोले मज्जाले उसको पुती को रस चलाउन थाले,खान थाले, उसको भंगाकुर ( क्लिटोरिस) ममज्जा ले चलाउन थाले मेरो जिब्रो ले, मुख भरिथुक निकालेर पुती भरि लगाई दिए , पुती बाटफुस्स फुस्स रस आइ रहेको थिए, पुती भित्रपनि जिब्रो घुसाई दिए, सबै रसलाइ मुख भरिदलेर पुतीमा मजा ले चाट्न थाले । यसो गर्दासरिता अहिले चाही ठुलै स्वर मा,” आ..ह आ..ह.आ..ह आ..ह.आ..ह आ..ह.आ..ह आ..ह.आ..हआ..ह.आ..ह आ..ह.आ..ह आ..ह. आ..हआ..ह.आ..ह आ..ह…..बाबा मजा आयो….. आ.ह.आ.ह ” गर्दै थिई । म आफ्नै मस्त सुरमा सरिताको पुती ग्वाम ग्वाम, ल्याप ल्याप, चाट्दै थिए। अब मेरो भाइलाइ सहि नसक्नु भै सकेकोथियो । माथि आए, उसको पुती को रस लेभिजेको मेरो मुख ले सरिता लाइ टंग किस खाइदिए, सरिता ले बेस्सरी मेरो जिब्रो, मेरो ओठ,चुसी रहेको थियो, मेरो जिउ उसको माथिथियो, उसको खुट्टा फाट्टीएको थियो, अनिखुट्टा ले मेरो कम्मर लाइ अँगालो मारेको थियो,त्यो पोजिसन मा मेरो लाड़ो ठ्याक्क सरिता कोपुती माथि थियो ।
बिस्तारै उसको भिजेको पुतीमा लाड़ो पसाए ।एकदम टाइट रहेछ । छिर्न एकदम गारो भईरहेको थियो, तर पुती मज्जाले भिजेकोले अलिसहयोग भने गरि रहेको थियो । उसको पुतीकोमुखमा जब पहिलो पल्ट मेरो मोटो लाड़ोकटाउको छिर्न लागेको थियो, सरिता लाइ दुखेछकि क्यारे, टंग किस खाइ रहेको मुख हटाएरसाइडमा लगेर पिडा हो कि, आनन्द हो कि ,दुखाइ हो कि, असह्य हो कि, के हो, सबै कोसमिश्रण जस्तो लाग्ने आवाज निकालेरसरिता ले जिउ पुरा तन्काइ ” आSssssssssss….. ह.. , बाबा……. मलाई मायागर्नुस बाबा .. ! आ………………………………ह…….. आ…………………….ह………… बाबा……..,अइया… आह.. आ……ह…. सीssssssss…..आःह…” गर्न लागि । उसले त्यासो गर्दा गर्दैउसको भिजेको पुतीमा मेरो लाड़ो भित्र छिरीसकेको थियो । उसको पुतीले मेरो लाड़ोलाइच्याप्प समातेको जस्तो भै रहेको थियो ।मेरोलाड़ो को टुप्पो, लाड़ो को सबै छाला, तल देखिमाथि सम्म, सरिता को पुती को भित्रि पर्खालसबै स्पर्श गरि रहेको थियो, उसको पुतीकोभित्रि पर्खालको भिजेको छालाले मेरोतात्तेको लाड़ोलाइ शान्त बनाइँ रहेको थियो ।
मेरो आँखा बन्द भै सकेको थियो स्वर्गीयआनन्दमा । मेरो मुख बाट पनि आह… आह..आवाज बिस्तारै आइ रहेको थियो । उसकोखुट्टा ले मेरो कम्मर मा अँगालो मारी रहेकोथियो.. उसको हात मेरो घाटी बाट अंगालो मारेरमेरो कपाल सुम्सुमाइ रहेको थियो, मेरो हातचाही उसको छाति बाट अंगालो मारेर उसकोढाड पछाडी बाट उसको कपाल मुसरी रहेकोथियो । यौनमा दुवै सरिर एक आत्मा हुन्छ भनेजस्तो उसको सरिरको दुध मेरो छाति माथि,उसको खुट्टा ले मेरो कम्मरलाइ अंगालो, मेरोजिब्रो ओठ, उसको जिब्रो ओठ, मेरो लाड़ोउसको भिजेको पुती, आःह .. हामी दुवै योसंसारमा नभई अर्कै संसार मा उडी रहेकोजस्तो भैरहेको थियो । मेरो लाड़ोको टुप्पो लेउसको पुतीको भित्र सबै तिर महसुस गरिरहेको थियो । भित्र बाहिर गर्दा, उसको पुतीकोभित्र माथि पट्टी लाग्दा सरिता ले मेरो जिब्रोमज्जा ले चुस्थी । मैले तेही ठाउँमा लाग्ने गरिउसको खुट्टा अझै माथि पुराएर, मज्जा लेचिक्न थाले ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम !
सरिता ले कस्सेर समातिरहेको थियो अझमलाई, उसको अँगालो अझै कस्सि रहेकोथियो, स्वासको गति बडी रहेको थियो,धड्कनको गति तेज भएर बाहिर सम्म सुनीरहेको थियो । म भने निरन्तर सरिताको पुतीकोरसले नुहाई रहेको मेरो रन्कि रहेको लाड़ोकोउसको पुती भित्रको पसाईको स्पर्शकोमजामा आँखा चिम्म गरेर, सरिता लाइ बेस्सरीअँगालो मारेर, उसको घांटीमा जोडले चुसेर,ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वामल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम ल्वाम चिकि रहेकोथिए । खाट हल्ली रहेको थियो, भूकम्प आएकोहो कि जस्तो लागेको थियो बीचमा, तर त्यतिभूकम्प ले रोक्ने वाला थिएन हाम्रो चिकाइ,हाम्रो माया गराई, हाम्रो सामिप्यता, हाम्रोत्यो आनन्द ! आ.. हा.. सम्झेर आउदा पनिलाड़ो रनक्कै रंकिन्छ ! समय मानौ रोक्किएकोजस्तो भएको थियो । स्वर्गीय आनन्दमालिप्त थियौं दुवै !
एकछिन पछि को चिकाइ पछि सरिता लेएक्कासी पुरा जिउ तन्काइ ! टाउको बेस्सरीपछाडी तिर फर्काइ, खुट्टा ले झन् कस्सेर मेरोकम्मर मा अँगालो कसी, र हातले मेरो पछाडीढाड मा बेस्सरी औला गाडेर, अर्को हातले मेरोकपाल बेस्सरी समातेर, मैले चिक्दै गर्दा,आवाज निकाली”आ………………ह………………………………………..आ…. ह………………..आ………. ह……… आ….ह…. आ…. ह…. आ…ह.. आ.ह. आह आह. आह आह आह आह ” एकछिनमा कस्सेको अँगालो खुकुलो भयो, खुट्टा
सिथिल, अनि जिउ सिथिल । उसको चरम सुखपुगेछ । आखा बन्द गरेर एकछिन सम्म ” आहआह” गरि राखी, मलाई कान मा बिस्तारै, “गरिराख्नुस बाबा , नारोक्नुस” भनि .. मेरो नि झर्नलागेको थियो.. यही मौका हो एकै चोटी चरमसुख पुग्ने भनेर मैले पनि एकछिन मजा लेल्वाम ल्वाम ल्वाम गरे, अनि भित्र झार्न डरलागेर, बाहिर झरेर उसको पेट मा हल्लाएरझारी दिए । दिउसो दुइ चोटी गरि सकेको भएपनि, मेरो लाड़ो बाट कत्ति धेरै फुसी
उछिट्टीएर उसको दुधमा उसको पेटमा झर्नपुग्यो । सरिता अझै पनि चरम सुखकोआनन्दमा आखा बन्द गरेर पेट र दुधमा झरेकोफुसीलाइ आनन्दले क्रिम लगाए जस्तो गरेरचलाई रहेको थिई । मेरो पनि अघि हल्लाएरझर्दा हातमा नअटाएको लाड़ो बिस्तारै सिथिलभै रहेको थियो, सरिता को दुध चुस्दै, साइड मा
पल्टिएर , उत्तानो परेको सरिता लाइ अँगालोमारेर, खुट्टा चढाएर, आखा चिम्म गरेर,एकछिन मजा लिएर दुवै जना आराम गर्यो ।कस्तो मजाले एकछिन त मस्त निदाएछौ !अर्ध निन्द्रामा सरिता लाइ अँगालो मारीरहेको थिए, सरिता ले पनि मेरो कपालसुम्सुमाइ रहेकी थिई । बिस्तारै मन्द स्वर मामैले सरिता लाइ मजा आयो ? भनेर सोधे । बन्दआखा मा सरिता ले मिठो मुस्कान सहितटाउको हल्लाएर सहमति जनाइन । सरिता कोदुध, घाटीमा किस गर्दै थिए, आनन्द लिदै थिए,फेरी एकचोटी गर्ने कि भनेर सोच्दै थिए,आनन्द को सिमानै थिएन मन मा !
धड्यांग ……………..! आवाज आयो !भुइचालो आएछ फेरी ! यो भुइचालो ले चाही दुवैजना लाइ उठाई नै दियो ! अलि ठुलै आवाजआएको हुनाले, अनि त्यस माथि हामी तिनतल्ला माथि भएका ले ! अब जाउँ जाउँ भनेरसरिता ले भनि, मैले नि हुन्छ भन्दै लुगा लगाएँ,हतार हतार ! अनि सरिता लाइ पहिला जाउभनेर, म चाही ढोका लगाएर हतार हतार गए !टेन्ट पुग्दा सरिता सुत्ने ठाउँ मा पुगी सकेकीरैछे ! मलाई देखेर मुसुक्क हासी कसैले नदेख्नेगरि ! म चाही कसैले देख्छ कि भन्ने डर ले हतारहतारमा सुत्ने ठाउँ मा गए ! एकछिन पछिसरिता ले ब्ल्यांकेट बाट भित्र हात लुकाएरमेरो छाती मा हात राखी ! म तिर हेरेर मुसुक्हासी ! अनि सुत्न तिर लागि! म पनि आँखाचिम्म मात्र के गरेको थिएँ, अघि को मेहनत,सिथिल जिउ, भुइचालोको डर, कति खेरनिदाएछु थाह नै पाइन !
छिटो छिराउनु न भन्दै मेरो लाडो आफ्नो पुतिमा लगेर मिलाइदिइन र मैले जोडले झड्का दिदै चिक्न थाले // Nepali Sex Story